Kungani Ibhizinisi Lakho Kufanele Lisebenzise Ividiyo Ekumaketheni | Martech Zone
NgoLwesibili, Septhemba 15, 2020 NgoMgqibelo, Januwari 23, 2021 Douglas Karr
Senze imizamo yethu yamavidiyo lapha eMartech futhi kube kuhle… ukuzibandakanya ngokujulile ku-Youtube nakwezokuxhumana nesiqeshana semizuzu engu-1 kuya kwemibili sokumaketha.
Ngeshwa, kuseningi izinganekwane laphaya maqondana nezindleko nomzamo odingekayo ukukhiqiza amavidiyo wakho wemizamo yokumaketha. Okuhle kunakho konke, akudingeki usebenze kuzo zonke izinselelo zobuchwepheshe - kunezinketho ezinhle kakhulu zazo ibamba ividiyo yakho isiyatholakala.
Amavidiyo awasetshenziswa ngokuphelele, okwenza kube wukutshalwa kwemali okuhle kwenkampani yakho ngoba izimbangi zakho aziyisebenzisi kodwa kunjalo ukushayela izibalo zokuzibandakanya ezimangalisayo nezibalo zokuguqulwa. Ukubukwa kwamavidiyo eselula kuyaqhubeka nokukhula njengoba izikrini ezinhle kanye ne-bandwidth zivumela amahora wokubukwa okwenziwe ngezifiso. Ividiyo iyi- a Isu eliphoqayo uma kukhulunywa nge-imeyili… Engayisekeli ividiyo kepha ekwazi ukushayela okuningi okuchofoza okuningi.
Ividiyo ingenye yezindlela eziphumelela kakhulu zokubeka umlayezo wakho phambi kwezithameli. Kule infographic, bona ukuthi kungani ividiyo isebenza, nokuthi ungayithola kanjani ngokugcwele ekumaketheni kwakho.
Le infographic ichaza ukuthi kungani i- Isu lokumaketha kufanele lisebenzise amavidiyo, lapho ungaqhamuka khona nemibono, inqubo yokwenziwa kwamavidiyo, ukuthi ungayisabalalisa kanjani, yini okusebenza kahle kakhulu, namanye amathiphu angeziwe.
Tags: inqubo yokudala ividiyoukusabalalisa ividiyoimibono yokuthengisa ividiyoamathiphu evidiyokungani usebenzisa amavidiyokungani ukumaketha kwevidiyo